Sabti 12 Bisha Saddexaad 2022
Shaaha Sameeya Daacadnimadu waa samaynta shaaha casriga ah taas oo diiradda saareysa khibrad farxad leh adeegsashada. Mashruucu wuxuu inta badan diiradda saarayaa waxyaabo ku habboon bilicsanaanta iyo khibradda adeegsadaha iyada oo ujeeddada ugu weyn ay soo jeedineyso in badeecaddu ka duwanaato waxyaabaha hadda jira. Meesha ay ka sameysan tahay shaaha ayaa ka yar jirka oo u oggolaanaya badeecada in ay eegto dhulka keenaya aqoonsi u gaar ah. Jirka xoogaa yar oo isku dhafan oo lagu daro sagxad diiran sidoo kale waxay taageertaa aqoonsiga gaarka ah ee sheyga.
Jimco 11 Bisha Saddexaad 2022
Chandelier Duubka loo yaqaan 'Lory Duck' waxaa loogu talagalay sida nidaamka hakinta oo laga soo uruuriyay mowduucyo laga sameeyay naxaas iyo muraayad saliidaha ah, mid kastaa wuxuu u egyahay shimbiro jilicsan oo si adag ugu dhex daadanaya biyaha qabow. Mowjaduhu sidoo kale waxay bixiyaan habeyn; taabasho, mid walba waa lagu hagaajin karaa inuu wajaho jihada kasta oo uu sudhan yahay dherer kasta. Qaabka aasaasiga ah ee laambaddu wuxuu ku dhashay si dhakhso ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahneyd bilo cilmi baaris iyo horumarin leh tusaalayaal tira badan si loo abuuro isku dheelitirnaanteeda ugufiican iyo muuqaalka ugufiican dhammaan dhinacyada suurtagalka ah.
Khamiis 10 Bisha Saddexaad 2022
Arbaco 9 Bisha Saddexaad 2022
Talaado 8 Bisha Saddexaad 2022
Megalopolis X Shenzhen Super ርዕሰ
Isniin 7 Bisha Saddexaad 2022
Megalopolis X Shenzhen Super ርዕሰ Megalopolis X waxay noqon doontaa xarunta cusub ee ku taal bartamaha barta weyn, una dhaw xadka u dhexeeya Hong Kong iyo Shenzhen. Qorshaha guud wuxuu ku darayaa naqshadda dhismaha shabakadaha dadka lugeeya, jardiinooyinka iyo meelaha dadweynaha. Shabakadaha gaadiidka dhulka ka hooseeya iyo kuwa ka hooseeya ayaa la qorsheynayaa iyada oo la kordhiyo isku xirnaanta magaalada. Shabakad kaabayaasha kaabayaasha ah ee dhulka ka hooseysa waxay bixin doontaa nidaamyo loogu talagalay qaboojinta degmada iyo daaweynta qashinka tooska ah qaab aan kala go 'lahayn. Ujeeddada ayaa ah in la aasaaso qorshe guud oo hal abuurnimo leh oo loogu talagalay sida magaalooyinka loo qaabayn doono mustaqbalka.
Haezer Farshaxanimada Album Album Isniin 4 Bisha Todobaad
Up Qolka Musqusha Axad 3 Bisha Todobaad
Il Mosnel QdE 2012 Astaan Khamri Oo Dhalaalaysa Iyo Baakad Sabti 2 Bisha Todobaad
Shaaha Sameeya Chandelier Ururinta Dharka Dumarka Mustaqbalka Wadooyinka Tareenka Ee Fudud Ee Magaalada Rugta Ilkaha Megalopolis X Shenzhen Super ርዕሰ